ဒီအားလပ်ရက်ကိုကြိုးစားရန်အကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်အချိုပွဲချက်ပြုတ်နည်း ၄၈ ခု - အစားအစာ
အပြင်အဆင် စီမံကိန်း & အကြံဥာဏ် Celeb ကြည့်ပါ နိုင်ငံတကာ ကျန်းမာရေး အိမ်သုံးဆေးများ အခြား ဖက်ရှင်သတင်း ရုပ်ရှင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု
ဒါဟာယခုနှစ်ရဲ့အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ ... ထပ်ခါတလဲလဲပြောရရင်အချိုပွဲပညာလည်းပါတယ်။ (အလေးအနက်ထားပြောရရင်သကြားကွတ်ကီးနဲ့သကြားလုံးဘယ်နှစ်ယောက်စားနိုင်မလဲ။ ) အားလပ်ရက်အထင်ကရနေရာရောက်တာနဲ့ဒါတွေကိုစမ်းကြည့်ပါ ခရစ်စမတ် ရာသီဥတုအရသာအသစ်များနှင့်ဖန်တီးမှုနည်းလမ်းများဖြင့်ဖော်ပြသောအချိုပွဲချက်ပြုတ်နည်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်ပြုပြင်ထားသော gingerbread cookies များကိုပြောကြသည်။ gluten-free သည်ဂန္ထဝင် pie ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အားလပ်ရက်ဖုတ်ပွဲများကိုပြုလုပ်သည့်အလွယ်ကူဆုံး single-service အချိုပွဲများဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ၄၈ ပွဲသည်သင်နှင့်အနီးဆုံးနှင့်အချမ်းသာဆုံးဖြစ်သည်။
သက်ဆိုင်သော: အစစ်အမှန်အရာကဲ့သို့မြည်းစမ်းကြောင်းလွယ်ကူသော gluten-free အချိုပွဲ ၂၅
1. Peppermint မာရ်နတ်ရဲ့စားနပ်ရိက္ခာအမြင့် ဦး ထုပ်မယားစကား
အကောင်းဆုံးရာသီအလိုက်အနံ့အရသာ၊ ငရုတ်သီးနှင့်ချောကလက်တို့သည်ဤအလွန်ကောင်းမွန်သောအိမ်လုပ်မယားစကားများတွင်စုစည်းထားသည်။ သရဖူဆောင်းသောဘုန်းကြီးသလော။ marshmallow နှင်းခဲ၏တစ် ဦး ရက်ရက်ရောရော dollop ။
ဓာတ်ပုံ - Mark Weinberg / ပုံစံ - Erin McDowell
သင်၏အားလပ်ရက်ပိုင်ဂိမ်းကို gingerbread cookie ၏အတွေးအခေါ်အပေါ် မူတည်၍ ၎င်း၊ ချယ်ရီသီးအသားများဖြင့်အရသာရှိသောဤ gingery လက်ရာဖြင့်အရသာရှိအောင်လုပ်ပါ။
၃။ Eggnog Snickerdoodles
Eggnog ရုံဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဤ chewy cookies များသည်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေစခန်းအတွက်အိမ်လုပ် eggnog ပါဝင်သည်။
ဓာတ်ပုံ - Liz Andrew / Styling ။ Erin McDowell
4. သစ်ကြံပိုးခေါက် Mascarpone Pudding
ဤမွှေးကြိုင်သော၊ (ဒါကကြင်နာတာရမ်မီနဲ့တူတယ်၊ အနုတ်ကကိတ်မုန့်။ )
၅။ Gingerbread Lattice ကွတ်ကီးများ
Gingerbread ရှိလူများနှင့်အိမ်များသည်သူတို့ပုံသဏ္goodာန်ကဲ့သို့အရသာသိပ်မရှိလှသဖြင့်အထူးအရာတစ်ခုခုကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ဤရွေ့ကား တကယ်တော့ အရသာရှိတဲ့ gingerbread cookies များဟာသေးငယ်တဲ့ pie tops များလိုပါပဲ။ (အပိုဆု: cookie ကိုဖြတ်စရာမလိုပါ။ )
၆။ Vegan & Gluten-free Dark Chocolate Ginger Tart
သင်ဤ decadent နှင့် zingy tart လုံးဝသက်သတ်လွတ်ကြောင်းအံ့သြသွားပါလိမ့်မယ် နှင့် ဂျုံမှုန့်စသည်မှကစီဓာတ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်ရသောအသားဓာတ်တစ်မျိုးမပါဝင်သော။ အနိုင်ရအနိုင်ရ။
ဓာတ်ပုံ - Matt Dutile / ပုံစံ - Erin McDowell
7. CARDAMOM CREAM- ဖြည့် Bundt ကိတ်မုန့်
Bundt pan သည်အမှန်တကယ်အလွန်ရိုးရှင်းသည့်ဤအိမ်လုပ်ကိတ်မုန့်ကိုဖန်စီကြည့်သည်။ ထို့အပြင်ရာသီအလိုက်အမွှေးအကြိုင်များသည်ပူနပ်သောသို့မဟုတ် cider နှင့်အတူတကွတွဲဖက်ထားခြင်းကြောင့်ဒီအချိုပွဲကိုခရစ္စမတ်ပွဲအတွက်အလွန်ကောင်းသည်။
ဓာတ်ပုံ - Christine Han / Styling: Erin McDowell
Marshmallow Topping နှင့်အတူ 8. Sweet အာလူးသကြားကွတ်ကီးများ
ညစာမစခင်စားချင်တဲ့စားကောင်းသောက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့လိမ္မော်ရောင်ကွတ်ကီးတွေနဲ့ဂန္တ ၀ င်အရံဟင်းပွဲကို decadent အချိုပွဲအဖြစ်ပြောင်းပါ။
Jerelle Guy / Black Girl မုန့်ဖုတ်
9. ပင်လယ်ဆား Butterscotch Tart
ဗာဒံသီးသည်ဤ tart ၏ကြည်လင်သောမျက်နှာပြင်ကိုလုံးဝ gluten-free ဖြစ်စေသည်။ ထိုအခါအနည်းငယ်ငန်အိမ်လုပ် butterscotch အဆာရုံ gooey ၏ပြီးပြည့်စုံသောပမာဏဖြစ်သည်။
10. Baileys ချောကလက် Truffles
အားလပ်ရက်အချိုပွဲတစ်ခွက်ကပိုပျော်စရာကောင်းသည်ကပိုပြီးပျော်စရာကောင်းသည်။ ဤရွေ့ကား truffles မုန့်ဖုတ်မလိုအပ်ပါဘူးနှင့်ရာသီတစ်လျှောက်လုံးတစ်စိတ်ကူးအိမ်ရှင်ဆုကြေးဇူးကိုဖြစ်ကြသည်။
ဓာတ်ပုံ - Nico Schinco / ပုံစံ - Erin McDowell
11. Chocolate-Peppermint Linzer ကွတ်ကီးများ
တစ် ဦး cookie ကိုအားလုံးကြည်လင်ပြတ်သားစွာနှင့်အတူတစ် ဦး brownie ၏အရသာ။ အဖြူရောင်ချောကလက် ganache မုန့်အရည်ပျော်သော peppermint သကြားလုံးနှင့်အတူလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Chocolate-cookies cookies များသည် Santa အတွက်ကောင်းမွန်သော်လည်းသင်အဆင့်မြှင့်တင်ထိုက်သည်။ ဤရွေ့ကားအပေါငျးတို့သညာဘက်နည်းလမ်းတွေ, ငန်ချိုမြိန်စေးကပ်ခြင်းနှင့် gooey ဖြစ်ကြသည်။
13. Sugar Cookie ချောကလက်Crème Brulee
သင်၏အားလပ်ရက်အသစ်နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ မီးရှူးမရှိပါ သင်မီးရှို့ထားသောသကြားဓာတ်ဖြည့်ရန်အတွက်သင့်ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
14. Peppermint အခေါက် Crepe ကိတ်မုန့်
15. သစ်တော်ခွက် Pie
တစ်ခုအတွက်အချိုပွဲလား ပြဿနာမရှိပါဘူး။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအားလပ်ရက်ခွက်တွင်ပျော့ပျောင်းသောသစ်သီးဝလံသီးတစ်လုံးကိုထဲ့ပြီးထိပ်ပေါ်ရှိရေခဲမုန့်နှင့် ပတ်သက်၍ မရှက်ပါနှင့်။
ဓာတ်ပုံ - Michael Marquand / စတိုင်လ် - ကယ်ရိုလိုင်းလန်း
17. Sticky Toffee Honeycomb ကိတ်မုန့်
ရိုးရာစေးကပ်ခဲသောအရသာရှိသောအရသာရှိသည့်အရသာရှိသော toffee pudding ကိုရရှိသည်။
၁၈။ Caramel Frosting ဖြင့်ချိုသောအာလူးဖြူ
ငါတို့ကိုနားထောင်ကြလော့။ ပုံမှန် gingerbread cookies များတွင်ဘာမှမမှားပါ။ သို့သော်သွန်းသောကရမေလသည်မနာကျင်နိုင်ပါ။
Raspberry Jam နှင့်အတူ 20. Eggnog Custard
21. Peppermint Patti
Cookies တွေကဘာကြောင့်ပျော်စရာကောင်းတာလဲ။ ဤရွေ့ကားတစ်မိုင်အားဖြင့်ရိုက်နှက်စတိုးဆိုင်ဝယ် Patti ရှိသည်။
22. No- မုန့်ညက်သကြား cookie ကို Truffles
23. Matcha-Cranberry Linzer ကွတ်ကီးများ
Matcha အမှုန့်နှင့် cranberry သစ်သီးဖျော်ရည်များသည်ရာသီ၏လက်မှတ်အရောင်များကိုမမျှော်လင့်ဘဲပြသသည်။
၂၄ ။ ဆွီဒင်သစ်ကြံပိုးလိပ်
25. Dulce de Leche နှင့်အတူဘရောင်းသကြားကွတ်ကီးများ
26. Caramelized သစ်တော် Tartlets
ထောပတ် + သစ်တော်သီး + အညိုရောင်သကြား + pie မုန့်စိမ်း = သင်လုပ်ဆောင်ဖူးသမျှရာသီအလိုက်အချိုပွဲအများဆုံး။
27. Gရာအညိုရောင်သကြား Snickerdoodle ကွတ်ကီးများ
ဓာတ်ပုံ - Jon COSPITO / ပုံစံ - Erin McDowell
၂၈။ သစ်ကြံပိုးကြမ်းကြမ်းကြမ်းနှင့်အတူ Caramel Pecan Pies
29. ဂန္ထဝင် Eggnog
အေးခဲနေသောသကြား cookies များကိုဆေးကြောရန်အတွက်တစ်ခုတည်းသော * မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
မိနစ် ၃၀ ရှိပါသလား။ ဤ marshmallow- နှင့် pecan-spckled ကျောက်မျက်လုံးဝလက်လှမ်းမမီနိုင်ပါတယ်။
31. သေးသေးလေး Banoffee Cobblers
Crispy ဂရေဟမ် crackers တွေကချိုမြိန်တဲ့ငှက်ပျောသီး၊ fluffy whipped cream နဲ့ gooey dulce de leche ကိုတွေ့တယ်။
32. အနီရောင်ကတ္တီပါ Whoopie pies
Valentine's Day ညစာအတွက်ဒီစာရွက်ကို Bookmark လုပ်ချင်တယ်။
33. Caramelized Butternut Squash ဇောက်ထိုး-Down ကိတ်မုန့်
Mandarins၊ စပျစ်သီး၊ သွေးလိမ္မော်နှင့်လိမ္မော်များသည်ဆောင်းရာသီတွင်အရောင်တောက်ပစေသည်။
ဓာတ်ပုံ - ခရစ္စတင်းဟန် / ပုံစံ - Erin McDowell
35. Caramel အုန်းသီး Macaroons
အောက်ခြေချောကလက်နှင့်စန်း၌နှစ်မြှုပ်! သငျသညျအရွယ်ရောက် Samoas ရရှိပါသည်။
၃၆။ No-Bake Mini Mason Jar ဟင်းဒိန်ခဲ
gingersnap အပေါ်ယံလွှာ, အနီရောင် Currant ဂျယ်လီနှင့်ကြာပွတ်မုန့်နှင့်အတူဖြည့်စွက်။
37. လွယ်ကူသော Cranberry-Pecan Sandwich ကွတ်ကီးများ
ကျနော်တို့ခြောက်ခုပါဝင်ပစ္စည်းကွတ်ကီးကဒီ nutty နှင့် buttery ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သဲလွန်စမရှိ။ ၎င်းသည်ချဉ်သော cranberry-citrus အဆာအတွက်အကောင်းဆုံးသောပွဲဖြစ်သည်။
ပုလွေအနားများသည်သင့်ကိုမကြောက်ပါစေနှင့်။ ဒီ showstopper ကိုသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းထွင်းရန်လွယ်ကူသည်။
39. အနှေးချက်ပြုတ်ဆားငွေ့ - ကရမေလမ် Pudding
40. ချောကလက် - ကာရယ်လ် Pretzel Tart စာရွက်
သငျသညျခြစ်ရာကနေ pretzel အပေါ်ယံလွှာ, caramel အဆာနှင့်ချောကလက် ganache လုပ်ဖို့သင်ပါဝင်ပစ္စည်းများခုနစ်နှင့်မိနစ် 50 သာလိုအပ်ယုံကြည်နိုင်ပါတယ်? ဒါကဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုကြည့်ဖို့ယူထက်အချိန်လျော့နည်းပါတယ် ချိုမြိန် Magnolias !
41 Jammy Shortbread ဘား
အေးခဲနေသောအခြောက်လှန်းထားသော Raspberry သည်ထိတွေ့မှုပြီးဆုံးသွားစေသည်။
42. ပူ Buttered Rum
တစ်ငုံစာတစ်ခွက်ကမင်းကိုကိုးပူပြင်းတဲ့သူဘယ်သူလဲလို့မေးလိမ့်မယ်။ ထိုအ heck yeah, ကအချိုပွဲအဖြစ်မှတ်။
ဓာတ်ပုံ - Christine ဟန် / ပုံစံ - Erin McDowell
43. လိမ္မော်ရောင်နှင့်ချောကလက် Brioche tarts
44. Chai CrèmeBrûlée
45. အစဉ်အလာဆုံး (နှင့်အလွယ်ဆုံး) သကြား cookie ကိုချက်ပြုတ်
အိုကေကောင်းပြီ၊ ငါတို့မှာသကြားကတ်တွေမရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကျောခိုင်းသွားပြီ။
သက်ဆိုင်သော: အားလုံးသောအချိန်ကုန်ဆုံးအကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်အချိုပွဲ ၅၀၊ လက်ချ၊ ပြိုင်ပွဲမရှိပါ
BENITO MARTIN / အမြဲတမ်းသံပုရာ ADD
အားလုံးထုတ်ယူလိမ့်မည်ဟုမုန့်ဖုတ်စီမံကိန်းကိုရှာဖွေနေ အိုး s နှင့် ahh s? ဒန်နီယယ်အယ်လ်ဗာရက်ရ်ှ၏သူမ၏ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်အသစ်မှနာနတ်သီးနှင့်ဂျင်းဇောက်ထိုးကိတ်မုန့်အတွက်စာရွက်ကိုမကြည့်ပါနှင့်။ အမြဲတမ်း Lemon ထည့်ပါ ။ ၎င်းသည်ချို။ စပ်။ လက်တွေ့ကျအလှဆင်သည်။
PHOTO: NICO SCHINCO / ပုံစံ - ERIN MCDOWELL
47. Raspberry White Chocolate Yule Log
ဒီအားလပ်ရက်ရာသီကိုအထင်ကြီးရန်ရည်ရွယ်ပါသလား။ စာဖတ်သူတီထွင်သူ (နှင့်ရေးသားသူ) ထက်မပိုပါစေနှင့် Pie အပေါ်စာအုပ် ) ဂန္ပြင်သစ် bellche de Noël၏ Erin McDowell ၏နောက်ဆုံးမူကွဲ။ ဒါဟာငါတို့တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာအချိုဆုံးခရစ်စမတ် Yule မှတ်တမ်းပါ။
ဓာတ်ပုံ / ပုံစံ - ကက်သရင်းဂျီလင်
48. ချောကလက် Gingerbread Cookies
အကယ်၍ နူးညံ့သောသကာရည်နှင့်ကချောကလတ်အဟောင်းနံပါတ်များတွင်အလွန်အရသာရှိသောကလေးရှိခဲ့လျှင်၎င်းချောကလက် gingerbread cookies များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကချိုမြိန်ပေမယ့်မရ အရမ်းလွန်း အားလပ်ရက်အချိုပွဲတစ်ခု၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအမွှေးအကြိုင်များနှင့် (ချောကလက်များများများလွန်းသည်) ။
သက်ဆိုင်သော: အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအကောင်းဆုံး Starbucks အားလပ်ရက်အချိုရည်များ
Categories အစားအသောက် စိတ်ဖိစီးမှု၏ ချက်ပြုတ်နည်းများ
အားလုံးအချစ်ဆုံးရင်ခုန်စရာ hollywood ရုပ်ရှင်